ny mitaky ny famerenana ny vidin’ireo tapakila teo aloha na inona na inona kaompania nanaovana ny famandrihana. Nanamarika anefa ity masoivoho ity fa tsy mahalala ny mombamomba ireo dingana tokony harahana hitakiana izany saingy mampahalala vaovao ihany kosa. Anjaran’ny rehetra no manatona ireo kaompania nanaovany famandrihana tapakila hitakiany izay famerenam-bola izay. Nampahafantatra moa ity masoivohon’i Madagasikara ao Frantsa ity fa efa voarindra araka ny fahatongavany hatramin’ny martsa 2020 ny fisoratan’ireo Malagasy maniry hamonjy izay fodiany izay. Nalefa niandalana niazo an’Antananarivo ireny lisitra ireny mba hahafahan’ny tompon’andraikitra Malagasy manasokajy ihany koa ny toerana tokony hametrahana ireo mpandeha tody eto an-tanindrazana. Amin’ny alalan’ny mailaka no handraisan’ireo mpandeha amin’ny sidina voalohany ny fotoana tokony hiaingany, raha ny fanazavana hatrany.